Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Khasnadaha Seychelles: 5 Hadiyado Maxalli ah oo Guryaha Lalagu Celiyo
Dhamaadka safarku had iyo jeer waa qaybta ugu adag, laakiin maahan inaad ku sagootiso janno markaad ka tagayso Jasiiradaha Seychelles. Jasiiradaha waxay ku siinayaan hadiyado aad u tiro badan si aad ula wadaagto kuwa aad jeceshahay ama aad si fudud ugu qadarto xusuusta baxsashadaada qalaad.
Laga soo bilaabo caraf, dahab, farshaxanno iyo waxyaabo kale oo badan, ma jiri doono wax ka badan khasnado la soo celiyo waddankii ka dib booqashadii Seychelles.
Xusuus-qoryo gacmeed si gaar ah loo farsameeyay oo lagu sameeyay jacayl had iyo jeer waxay leeyihiin meel gaar ah, iyo badeecadaha gudaha lagu farsameeyo waxay isticmaalaan walxaha dabiiciga lagu bixiyo.
Weligoodna kuma khaldami kartid hadiyad sameyn ku yeelan doonta raad waara oo ku saabsan daaraha guriga oo ay ku raaxaystaan ​​sida cunnooyinka sida saffron, masala, qorfe, nutmeg, iyo vanilj.
Booqo kaymaha roobka iyo xeebaha bacaadka ah ee jasiiradaha adigoon gurigaaga uga bixin caraf udgoon khadadka maxalliga ah ee dalka laga soo saaro. Waxaa ku dhiirrigeliyay caraf udgoonkii dhirta qalaad ee Seychelles, cadarradani waxay kugu sasabi doonaan vanilj badeed leh, liin macaan-macaan iyo codad diiran oo diiran. Qaar ka mid ah carafayadan maxaliga ah waxaa lagu soo saaray shaybaarka ugu da'da weyn soosaarka wax soo saarka gobolka. Xaqiiqdii inaad soo jiidaneyso, caraf udgoonkan ayaa jeclaan doona kuwa aad jeceshahay waxayna kugu celin doonaan kuleylaha.
Tus jidhkaaga waxoogaa jacayl leh qaar ka mid ah alaabooyinka jirka ee waxyoonay ee laga sameeyay halkan kana samaysan janno aan fiicnayn! Waxay ku daboolan tahay dhirta qalaad, jasiiraduhu waxay leeyihiin noocyo dabiici ah, walxo dabiici ah oo isku dhafan si ay u daboolaan baahi kasta oo maqaarkaaga ah oo ay soo saaraan noocyada maxalliga ah. Xashiishka hadhuudhku waxay dib kuugu celinayaan xeebta bacaadka ah waxayna xoqinayaan maqaarkaaga, iyo noocyo badan oo qoyaan-qoyaan leh oo leh astaamo vanilj diirran, milix cusbo leh iyo liitada macaan si ay maqaarkaaga u siiyaan dhalaalka kulaylaha.
Jawharad ka socota Beer Ceeden
Jasiiradaha Seychelles waxay ku taal laba goobood oo UNESCO ah oo midkoodna yahay Vallée de Mai, oo lagu xaman jiray inay tahay guriga Beerta Ceeden. Goobta dhirtu ku badan tahay ee Praslin waxay martigalisaa keyd hanti badan oo ay ka mid yihiin taajka loo yaqaan 'Coco de Mer timir' oo u gaar ah, kaas oo dhaca soo saarista lowska ugu weyn adduunka, ee ku yaal jasiiradaha. Waad soo bandhigi kartaa lowskan noociisa ah oo nooc ah adiga oo hal ama laba guri kugula xamanaya. Helitaanka gacmahaaga Coco de Mer waa ka sahlan tahay sida qofku qiyaasi karo; si fudud ugu tag labada dukaanno ee Frances Rachel Street ee Victoria, Hay'adda Jasiiradda Seychelles (SIF) ama Hay'adaha Qaranka ee Seerayaasha (SNPA) oo soo iibso mid ka mid ah xulashadaada, hubi inay sidato caddeyn xaqiijin ah si ay u muujiso in si sharci ah lagu helay , oo aan ugaarsan. Madax ka noqo Wakaaladda Nadiifinta Qaranka ee Orion Mall, Victoria si aad u hubiso inaadan wax dhibaato ah kala kulmin garoonka diyaaradaha. Nooca daanyeerka ah ee daandaansiga u eg - mid walbana wuu ka duwan yahay - waa hubaal inuu abuurayo sheekooyin ku saabsan fasaxaaga janada.